Allgedo.com » Biyo la’aan baahsan oo ka taagan Tuulooyin ka tirsan degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo.
Biyo la’aan baahsan oo ka taagan Tuulooyin ka tirsan degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo.
Biyo la’aan aad u daran oo saameyn ku yeelatey nolosha dadka iyo duunyada ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ka taagan tahay tuullooyin ka tirsan degmada Garbahaarey ee Gobolka Gedo, iyadoo Biyo la’aantaasina la sheegayo in haatan ay gaarsiisan tahay heerkii ugu adkaa.
Tuullooyinka ugu daran ee Biyo la,aantu y sida daran u saameysay ayaa waxaa ka mid ah Daabley, Godey, Caano maal, Reysqode, Qadiidaa, Buraa iyo qaar kale kuwaasoo dhowr xilli roobab oo is xigay aanan helin roob lagu diirsaday, waxayna taasi keentay in ay todobabyadii ugu dambeeyey ay ka guraan tuullooyinkaasi wariha, togagii iyo ceelasha ay dadka biyaha ka heli jireen,iyadoo dadkii Xoolaleydana la sheegayo in ay u hayaameen deegaano kale.
Odoyaasha iyo waxgaradka Tuulloyinkaasi oo la soo xariiray Warbaahinta ayaa waxay ka deyriyeen Xaalada Biyo la’aaneed ee ka taagan Tuullooyinkaasi oo ay sheegeen in ay taagan tahay meeshii ugu xumayd sida uu sjharaxayo Sabriye Rashiid Xaaji oo ah Gudoomiyaha Tuullada Daabley ee degmada Garbahaarey.
“Biyo la’aantu wey ka sii dareysaa marba marka ka dambeeya,fuustadii biyo ahna waxay gaartey lacag dhan ilaa 70-60 kun oo shilinka Soomaaliga ah,meesha noogu dhow oo biyo laga heli karana waxay noo jirtaa ilaa 16 km,dadkuna wey dhib qabaan ilaa iyo haddana ma jirto wax gurmad ah oo deegaanka soo gaarey sidaasina waxaa yiri Xaawo Aden oo ka mid ah Haweenka Tuulada Buraa oo ka tirsan degmada Garbahaarey.
Sidoo kale Maxamed Deerow oo ku hadlayey Magaca Odoyaasha Tuullooyinkaasii ayaa waxaa uu Codsi baaq ah uu u jeediyey Jaaliyadaha Dibada ee Soomaalida iyo Ganacsatada Gobolka sidii ay ugu taageeri lahaayeen Sameeynta Ceelal biyoodyo wax ka tara nolosha dadka iyo duunayada ku dhaqan Tuullooyinkaasi.
Tuullooyinkani ayaa waxay ka mid yihiin meelaha ugu daran ee xilliyada Jilaalka iyo Abaaraha biyo la’aan darteeda looga barakaco,iyadoo dadka halkaasi ku nool oo u badan xoolo dhaqato reer guuraa ah ayaa xilligani waxaa soo wajahdey biyo la’aan tii ugu darneyd ee soo marta mudo labo sano ku dhow.
Si kastaba arintu ha ahaatee Cabashadaani biyo la’aanta ah ee ka soo yeereysa dadka ku dhaqan Tuullooyinkaasi ayaa imaanaysa xili mudooyinkii dambe halkaasi ay ka jireen abaaro xoogan oo saameeyay nolosha dadka iyo duunyada.